Alahady 20 Oktobra 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 20 OKTOBRA 2019
Alahadim-bokatry ny Sampana Mpiangaly Zavamaneno - SMZM
"Maniria ny haminany"
Ivom-bokatry ny Sampana Mpiangaly Zavamaneno (SMZM) androany ary niara-dera an’Andriamanitra niaraka tamin’izany Sampana izany ny Fiangonana. Niredona sy nanakoako ny feon-javamaneno nanomezam- boninahitra an’Andriamanitra. Ny Diakona Randrianonimandimby Mikael no nitarika ny fotoana raha Rahaingonjanahary Rodolphe, Mpitandrina avy ao amin’ny Aumonerie Soavinandriana no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny STK Rantsana mozika ao amin’izany Aumonerie izany no niaraka taminy ary niara-nitendry tamin’ny mpitendrin’ny SMZM izao maraina izao. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no narahana.
Feon-javamaneno nataon’ny SMZM avy hatrany no niatombohan’ny fotoana, ny feon-kira « Gloire à Toi » no niarahan’izy ireo nitendry. Niarahaba ny fiangonana ny mpitarika ary nanolotra avy hatrany ny mpitandrina izay hitondra ny hafatry ny Tompo. Ny adinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky ho fiderana an’Andriamanitra dia ny tao amin’ny bokin’ny Salamo 150 : 1 – 6 ary ny fihirana ny hira fanevan’ny faha-200 taonan’ny Sekoly FJKM no nanaraka izany.
Tao amin’ny vavaka fiderana sy fisaorana no nisaorana ny Tompo ny nahafahana nihaona Aminy sy ny famindrapony. Nisaotra izy noho ny fanomezam-pahasoavana samihafa ary nangataka ny hamenoana ny Fanahy Masina hahazoana mampiasa ny talenta hampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra. Nisaotra izy noho ny nahatratraran’ny Smzm izao fotoam-bokatra izao ary nangataka ny hanatrehan’ny Tompo ny fotoana. Nisy feon-javamaneno fohy taorian’izay “Let the river run “ dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy avy eo.
Voahangy Rakotonarivo, Mpampianatra K5, no nitondra ny fampianarana ka vavaka no nanombohany izany. Fanazavana no nomeny momba ny Teny ao I Kor.14: 1 « Miezaha mitady ny fitiavana, nefa maniria fatratra ny zava-panahy koa, indrindra fa ny haminany » (1 Korintiana 14:1). Ny tadiavin’ny Tompo amintsika dia ny mitady fitiavana sy ny haniry fatratra ny haminany.
Ny hahafantarana fa mpianatry ny Tompo isika dia ny fifankatiavantsika izay nandidiny antsika. Ny faminaniana no andrasany amintsika izany dia ny manaiky ny ho irak’I Jesoa Kristy, hilaza ny fitiavany, hanao ny asany, hitory ny Filazantsara. Tandremo anefa ny faminaniana sandoka izay betsaka tokoa ankehitriny izay fitaka ataon’ny devoly. Isika izao no azo atao hoe mpaminany ary tokony hanana fifandraisana tsy tapaka amin’I Jesoa Kristy isika. Nofaranany tamin’ny vavaka izany. Ny hira Ffpm 183 “Midina ry fanahy o “ no natao tarian’izay.
Ny mpikambana ao amin’ny Smzm Rakotoarivony Christel no nitari-bavaka nisaotra sy nidera an’Andriamanitra ary nangataka ny Fanahy Masina hahenika ny mpiara-mivavaka ary hiasa amin’ny tsirairay. Aoka mba tsy hisy ho latsaka ny teny izay vakiana sy hirindra tsara ary Ianao no hampiteny ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra. Ny Diakona Rakotoarivony Lisy kosa no namaky ny Tenin’ny Soratra Masina. Ny Perikopa androany dia ny Mpitsara 4:6-14, Matio 7:21 -23 I Korintiana 12:4-11. Ny hira ao amin’ny Fihirana Fanampiny 6 “Ny Teninao “ no nohiraina taorian’izany.
Amin’ny maha Alahadin’ny SMZM dia noarahabaina manokana ny sampana tamin’ny alalan’ny loha-hevitra « Maniria ny haminany »Ny bokin’ny Mpitsara 4 : 5 (tantaran’i Debora no nentiny nangalana ny hafatra).Ao amin’ny toko faha-5 no ahitàna fa izy no mpitsara no sady filoham-panjakana. I Baraka izay ministry ny foloalindahy no sady mpamoron-kira no sady ihany koa mpitendry zava-maneno no niara-niasa taminy. Io boky io dia tena fampiasan’ny teolojianina feministe izay manohatra ny rafitra mipetraka ka hanjakan’ny lehilahy ary toerin’ny teolojia feminista. Hita ao izany ny hoe mpaminany vavy no sady mpitondra ny tenin’Andriamanitra.
1 – Raha te haniry ny haminany ianao, raha te ho mpitondra ny tenin’Andriamanitra dia maniria ny ho eo akaikin’Andriamanitra.
Raha maniry haminany ianao dia mila manakaiky Azy ianao. Zava-dehibe izany eo amin’ny fiainan’ny fiangonana. Raha mamaky ny bokin’ny Mpitsara dia misy tsingerina efatra tazana. Tsy mamela ny amin’ny fanaovandratsy Andriamanitra. Maniraka olona nefa Izy hanavotra sy hamonjy (isan’izany i Debora). Ampirisihana foana ianao ho eo akaikin’Andriamanitra. Masina isika, ary izany fahamasinana izany no manome hery. Nisy hira nataon’ny SMZM ho fanehoana ny fitoriana « Largo »
2 – Raha maniry haminany ianao dia mitoera tsara amin’izay nametrahan’ny Tompo anao
I Debora dia nametraka tamin’ny Baraka ny andraikiny tamin’ny fitarihana ny ady satria tsy nitady ny voninahitra tam’inizany. Fantany fa tsy maintsy ho azony ny fandreseana satria miaraka amin’Andriamanitra izy ary nametraka ny tenany ho mpitondra ny tenin’Andriamanitra. Rehefa miaraka amin’ny Tompo dia azo antoka fa hanana fandresena. Ny finoana an’i Kristy dia efa antoky ny fandresena.
Koa aza misalasala manantona an’ny Tompo, ary mipetraha tsara amin’ny toerana izay Ametrahany anao mba hamoha be ho an’ny Fanjakan’ Andriamanitra sy ny fandresen’i Jesoa Kristy teo amin’ny hazo fijaliana. Amen
Nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika avy eo. Na dia henonay aza ny sitraponao dia ninia nandika ny didinao izahay. Tsy izay manao hoe Tompoko Tompoko no ankasitrahana fa izay manao ny sitraponao. Mifona izahay, mangataka famelana avy aminao satria meloka izahay. Diovy izahay, sasao madio ary havaozy. Ny hira ao amin’ny fihirana fanampiny 22 “ Tsy mendrika ahy “ no natao avy eo.
Ny teny famelan-keloka dia noraisina tao amin’ny ISAIA 44:22 « Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; Koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho. » (Isaia 44:22) Noredonina ny hita 451 “Tompo ô, tsy takatry ny saiko.” avy eo. Natao ny fanekem-pinona laharana fafa- 3 taorian’izany.
TATITRY NY ASAN'NY SAMPANA
Ny mpitantsoratry ny Sampana Raboanarijesy Liantsoa no nanao ny tatitra nampahafantatra ny asa vita tao anatin’ny 11 volana farany, anisan’izany :
. Ny nitsanganan’ny vaomieran’ny aim-panahy sy fitaizana, teknika sy hira, fananana sy lozistika, fifandraisana, sosialy ary vola tao amin’ny Smzm taorian’ny fanavaozana ny tompon’andraikitra. Misy solontenan’ny birao isaky ny vaomiera
. Ny fandraisana anjara tamin’ny fiofanan’ny tompon’andraikitra tamin’ny volana marsa 2019
. Fitoriana Filazantsara sy fitsangatsanganana tany Ivato ny volana Jona 2019
. Lasy fanabeazana sy fiofanana ho an’ny mpitendry ny volana Oktobra 2019
. Ny fitendrena amin’ny fotoana samihafa
. Nanolotra fanomezana ho an’ireo kamboty tamin’ny fetin’ny ray
. Namangy ray amandrin’ny Sampana
. Ny fandraisana anjara tamin’ny asa fanavaozana ny sekoly teny Ambohidratrimo
. Nanatrika ny fiofanan’ny mpitendry zavamaneno nokarakarain’ny Foibe Fjkm tamin’ny volana
. Nikarakara ny fandraisana ny mpitendry zavamanenon’ny Synoda-paritany faritra faha-10 teto amin’ny tananan’ny Fiangonana
. Nanatanteraka ny herinandrom-bokatra
Taorian’izay dia nanao ny anjara feon-kira ny mpitendry : Prélude et Chorale –Saint Preux.
Niroso tamin’ny fanamakiana ny raharahan’ny Fiangonana izay nambaran’ny Mpitantsoratra Razafimaharo Mamy. Toy izao ny voalaza tamin’izany : . Raharaha ivelany : Ny nisongadina tamin’izany :
– Ny Sampana Fivondronana Laika hanatantera zaikabe any Manakara izao volana Oktobra izao
– Ny fiofanana karakarain’ny Synoda-paritany eny amin’ny Fjkm Soavimasoandro ny Alakamisy 31 Oktobra ho an’ny tompon’andrakitra rehetra ny Fiangonana
– Antsan-kiran’ny Chorale Maintimolaly Ambohitantely hoe “Hafa ihany I Bessa” ny Zoma 25 Oktobra
. Raharaha anatiny :
– Misy ny fivoriana fiheveran-draharaha ny Alahady 27 Oktobra sy ny ankatoky ny fandraisana
– Notononina ny tatitry ny rakitra sy voady ary fara-rakitra nandritra ny herinandro
– Ny fiantsoana fivoriana avy amin’ny Sampana Sampan’asa Asa ary Vaomiera.
– Nanao ny fanentanana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina avy eo. Niarahaba ny SMZM aloha dia nisaotra ny Fiangonana iray manontolo tamin’ny fikarakarana sy fampaherezana tamin’ny fahalasanan’ny Mpitandrina Ramino Paul. Nisaotra koa izy ny Mpitandrina Rahaingojanahary Rodolphe nitondra ny hafatra sy ny Stk Rantsana Mozika namelona aina ny fanompom-pivavahana niaraka tamin’ny mpitendrin’ny Smzm. Nampahatsiahy izy fa alahadin’ny Mamre, ny maseran’ny Fjkm, androany.
Ny mpanolon-tsainan’ny Fiangonana Razafindrabe John Bam no namaky ireo voady sy raki-pisaorana. Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany dia ny FFPM 3, FF 24, FF 10, FFPM 539, FF 20, FF 37, FFPM 515, FF 2, FFPM 545. Ny hira FFPM 432 andininy faharoa no nanolorana ny rakitra.
Ny feon-javamaneno “Intermède” no nanohizana izany ary nanatanteraka hira ny Hasin’ny Famonjena “Jesoa Tompo “
Natao ny hira 248 and 1 raha niakatra teny amin’ny alitara ny ray aman-drenin’ny hatao batisa niaraka tamin’ny zaza nandray ny Sakramentan’ny Batisa Andrianary Kanto Mahaly. Rehefa izay dia nisy feon-javamaneno fohy ary natao ny vavaka fangataham-pitahiana.
Ny fanirinay haminany, hoy ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina, dia ny ho eo ankaikinao Andriamanitra, ny mitoetra tsara amin’ny asa fanompoana efa nomenao anay. Nisaotra izy noho ny hafatra nentin’ny mpanompony entina hamakivaky ny herinandro sy hiainana ny fanirina haminany ary hijoroana vavolombelona. Nentiny am-bavaka ny Fiangonana rehetra, ny kristiana rehetra mpiara-mivavaka, ny asa atrehin’ny Fiangonana. Nivavaka izy ho an’ny Mpitandrina nitondra ny hafatra sy ny Rantsana mozika ary ny mpiara-mivavaka ao amin’ny Aumonerie Soavinandriana. Toy izany koa ny birao sy mpikambana rehetra ao amin’ny Smzm. Nivavaka izy ho an’ny fanompoam-pivavahana ho atao ao amin’ny Fjkm Analakely ny hariva sy ny Mamere an ‘ny Fjkm. Nentiny am-bavaka ireo tanora afaka bac ary koa ireo tsy afaka, ireo sahirana, ny tsy salama, ny azon’ny manjo, ireo izay manana ataka manokana, ireo mpitondra rehetra ao amin’ny Foibe Fjkm. Nivavaka izy ho an’ireo nanao voady sy raki-pisaorana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.
Ny hira Ffpm 36 “Moa ho haiko tantaraina” no noredonina talohan’ny nanononana ny tondrozotra ary ny Hira ffpm 146”Anao ny dera” rehefa avy natolotra ny tsodrano.
Ramahery Yves no teo amin’ny fanamafisam-peo, Ranaivoson Joel no teo amin’ny fàfana elektronika, Rabizamaholy Mahery no teo amin’ny orga ary nanafana ny fotoana ny mpitendry zava-manenon’ny Smzm sy ny Stk Rantsana mozika ao amin’ny Aumonerie Soavinandriana.
Naka ny sary : Voahangy Rajaofetra Nandray an-tsoratra : Joël Ranaivosoa sy Seta Rajaofetra.